दलान नेपाल : ......अन्यथा मधेशवाट काग्रेस, एमालेका नेताहरुको भागाभाग हुन्छ - प्रदीप यादव
......अन्यथा मधेशवाट काग्रेस, एमालेका नेताहरुको भागाभाग हुन्छ - प्रदीप यादव
१५ मिनेट स्वतन्त्र रुपमा मधेशी नागरिक संग मस्यौदा माथी अन्तक्रिया होस, अनि थाहा हुन्छ कि मधेशीहरु के चाहन्छन ।
मधेशी पार्टीहरुको विरोध कार्यक्रमहरुको विरगंजमा अगुवाई गरीरहेका युवा मधेशी नेता प्रदीप यादव हाल संघिय समाजवादी फोरम नेपालसंग् आवद्ध छन । फोरम नेपालको पर्सा जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका प्रदीप यादव यस क्षेत्रमा प्रभावशाली युवा नेताको रुप्मा परिचित छन । हालै विरगंजमा उनीसंग गरीएको कुराकानीको सम्पादित अंश
प्रदीप यादव, युवा नेता - विरगंज
तपाईहरुले नयां संविद्यानको प्रारम्भिक मस्यौदालाई च्यातनु भयो अनि अहिले पनि वहिष्कार गर्दै आन्द्योलनमा हुनु हुन्छ । किन यस्तो गनुृ भयो ?
- सवै भन्दा पहिला त हामीले सुरु मै १६ को आधारमा संविद्यँन निर्माणको प्रक्रिया अघि वढाए त्यसको विरोधमा हुन्छौ भनेका थियौ । तर प्रमुख दलहरुले त्यसलाई पुरै वेवास्ता गरेर मधेश आन्द्योलनको मर्मलाई पुरै वेवास्ता गर्दै मस्यौदा ल्याइ छाडे । जसले विगतमा मधेश आन्द्योलनको क्रममा भएको २२ बुदे देखि ८ बुदे सम्झौता सम्मलाई पुरै निषेध गर्ने काम गरेको छ । त्यसैले हामी सवै मधेशी पार्टीहरु यसको प्रतिकारमा अहिले उत्रेका छौ । हामीले यसलाई स्विकार गरेका छैनौ र यसलाई कार्यन्वयन पनि हुन दिदैन ।
तर मधेशी नागरिकहरुले त भोट काग्रेस, एमालेलाई नै दिएका हुन नि ? अनि उनीहरु आफुले चाहेको जस्तो बनाउछन त ? त्यसमा किन यत्रो आपति ?
-हो । मधेशीहरुले काग्रेस, एमालेलाई नै भोट दिएको कुरा हामीले पनि स्विकार गरेकै छौ । तर मधेशीहरुले विगतको मधेश आन्द्योलनको क्रममा भएको सम्झौताहरुलाई पुरै माइनस गरेर संविद्यँन जारी गर काहा भनेका छन । तपाई म संग हिडनुस, काग्रेस एमाललाई नै भोट दिएका मधेशीहरुले के भन्छन भने, प्रमुख पार्टीहरुले मधेशका साथ बईमानी गरीरहेका छन । हामीहरु संग आन्द्योलनको विकल्प छैन । हामी त्यही मधेशी जनताको मनोभावना अनुरुप नै आन्द्योलनमा होमिएका छौ ।
आन्दोलन गरेर अब के हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईहरु लाई ? किनकी काग्रेस एमालेले त जसरी भए पनि संविद्यान जारी गरिछाडछौ भनिराखेका छन नि ?
- हेर्नुस । विगतवाट हामीले पाठ सिक्दै अव उधारो सहमती र सम्झौताका लागी आन्द्योलन हुदैन हाम्रो । अब हामी आन्दोलन वाटै मधेश प्रदेश घोषणा गराएरै छाडछौ । अव जाल झेल चल्ने वाला छैन । मधेशले त्यसलाई कुनै पनि वाहानामा स्विकार गर्दैन ।
अनि अहिले तपाईहरुले मस्यौदा च्यात्ने, अन्तक्रिया वहिष्कार गर्ने लगायतका कामहरु किन गर्या ? जनतालाई आफनो सुझाव दिन वाट रोक्नु त राम्रो होईन नि ?
- हो । धेरै राम्रो प्रसंग तपाईले उठाउनु भयो । सवै भन्द्या पहिला त मधेशी जनताहरुले सडकमा आएर त्यत्रो प्रगट गरेको आफना कुराहरुलाई यो मस्यौदाले अस्विकार गरेका छन । त्यस पछि अहिले काग्रैस, एमालेले सुरक्षकर्मीहरुको आडमा आफना केही आसेपासेहरुलाई भेला गराएर मधेशी जनताको सुझाव यही हो भन्ने देखाउन खोजेका छन । हामी अहिले पनि खुल्ला रुपमा सरकार र प्रमुख दलहरु चुनौती दिन चाहन्छौ कि आउनुस , विना सुरक्षकर्मी र खुल्ला रुपमा १५ मिनेट मात्रै स्वतन्त्र रुपमा गरौ मस्यौदा माथी अन्त्क्रिया अनि थाहा हुन्छ कि मधेशीहरु के चाहन्छन । यो नौटंकी गरेर मधेशको मुद्धालाई थप वंग्याउने कामलाई हामीले सबै स्तरवाट सक्दो सशक्क्त प्रतिकार गर्छौ ।
तपाईहरु ले प्रतिकारमा उत्रे पछि काग्रेस, एमाले पनि त्यसको विरुद्धमा उत्रियो भने के हुन्छ ?
- तपाईलाइ म एउटा याहाका् केही यर्थातता भन्छू र तपाई पनि शायद यो कुरा थाहा नै होला कि काठमाडौमा काग्रेस एमालेका मधेशी नेताहरु जसरी प्रस्तुत हुन्छ, मधेशमा ठिक त्यसको विपरित हुन्छ । हो केही काग्रेस, एमाले भित्रका मधेशीहरु पनि दलाल चाही नभएको होईन तर जव आन्द्योलन अगाडी वढछ, तब तपाई हेर्दै जानुस, कि काग्रेस एमाले मधेशीहरु याहा आन्द्योलनमा सहभागी हुन्छ अन्यथा मधेशवाट काग्रेस एमालेका मधेशीहरु नेताहरुको भागाभाग हुन्छ ।